लगनगाँठो कस्ने कसम खाएर वास्तै गर्न छोडेपछि नाबालिग गायिकाको परिवारले अन्ततः यसरी लियो एक्सन – Nep Stok
लगनगाँठो कस्ने कसम खाएर वास्तै गर्न छोडेपछि नाबालिग गायिकाको परिवारले अन्ततः यसरी लियो एक्सन
फागुण ३०, २०७८ सोमबार 822
नाबालिग गायिकाको परिवारले फागुन ११ गते तनहुँ पल शाहवि’रुद्ध प्रहरीमा मु’द्दा दर्ता गरेपछि नेपाली कला क्षेत्रमा तरंग फैलिएको छ ।
त्यसअघि, गाउँमा भैँसी पाल्ने र कृषिकर्म गरेर बसेका बुबाआमा र गायिकाको मनमा एउटै डर अनि शं’का थियो, “उ ठुलो मान्छे हो, उसैका धेरै मान्छे छन्, न्या’यको लडाईँ जितिन्छ त ?”
हुन पनि फागुन ११ गते मु’द्दा दर्ता भएता पनि पाँच दिनसम्म पल शाह फरार थिए । पाँचौंदिन जब उनले आत्म’समर्पण गरे, त्यसपछिको हप्ता दिनहुँ दमौलीमा शाहको पक्षमा नाराबा’जी गर्न थाले ।
त्यो भी’ड र जमात देखेर उनीहरुले फेरि सोचे, “उसैका मान्छे धेरै रहेछन् ।”
युट्युब र सामाजिक सञ्जालभरि पी’डितमाथि अनेकौँ ला’ञ्छना लगाइए । कतिसम्म भने ‘हा’र्दिक श्रद्धा’ञ्जलीसम्म’ लेखिए, चल्तीका अभियन्तादेखि नायिकाहरुले पनि पी’डकको गल्ती नभएको भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिए । समाजमा पनि उस्तै टिकाटिप्पणी चले ।
दिनहुँ युट्युब हेर्ने पी’डितकी आमा भन्छिन्, “युट्युब हेर्न सकिन, एक हप्तासम्म म खाना खाइन, रोएर बिताएँ ।”
पी’डितको हालत पनि उस्तै थियो ।
पीडि’तको पीडा’माथि पी’डा थप्ने अभिव्यक्ति आएका कारण, कथित अभियन्ताहरुको पी’डकको पक्षमा सक्रियता, कानू’नको बर्खि’लापमा उनको सामाजिक सञ्जालमा चरित्रह’त्या । उनी निकै मानसिक तनावमा परेकी थिइन् ।
लगातारको मनोपरामर्श, उनका बाबुआमालाई लगातार सम्झाइबुझाई गरेपछि उनको परिवार उजु’री दिन तयार भएको हो ।
माघमा पहिलोपटक कानू’नी प्रक्रिया बुझ्न पीडित बालिका जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा एक्लै गएकी थिइन् । उनले कास्की प्रहरीलाई आफूमाथि पटकपटक क’रणी भएको र त्यसपछि मान’सिक हिं’सा भएको सुनाइन् ।
नाबा’लिग बालिकाले ग’म्भीर प्रकृतिको हिं’साबारे सुनाएपछि आफूहरुले अभिभावक लिएर आउन भनेको कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी रमेश थापाले बताए ।
तर, परिवारले सुरुमा आउन मानेन । लगातार फोनमार्फत् सम्झाइबुझाई गरेपछि तीन दिनपछि मात्रै पीडितका अभिभावक प्रहरी कार्यालयमा आइपुगे । तर, मु’द्दामामिला गर्ने विषयमा उनीहरुको असहमति रह्यो ।
एसपी थापा भन्छन्, “हामीले लगातार चार घण्टासम्म उहाँहरुलाई सम्झाइबुझाई गर्‍यौँ, हिं’साबारे डेमोसहित बुझायौँ, त्यसपछि बल्ल उहाँहरु तयार हुनुभयो ।”
बालिकाले प्रहरीमा आफूमाथि हिं’सा भएको बताएता पनि पोखराको घट’नाको हदम्याद भने नाघिसकेको थियो । बाल यौ’न दुरु’पयोग मात्रैको मु’द्दा कमजोर हुने भएको र तनहुँ तथा नवलपुर घटनाको हदम्याद नसकिएपछि यी जिल्लामा नै मु’द्दा दर्ता गराउन प्रहरीले जिल्ला न्यायधिवक्तासँग राय लियो ।
तनहुँमा जाहेरी दिने विषयमा सुझाव आएपछि कास्की प्रहरीले तनहुँ प्रहरीका डीएसपी युवराज खड्का र अनुसन्धान अधिकृत नरहरि अधिकारीलाई नै पोखरा बोलायो ।
कास्की प्रहरी प्रवक्ता सुन्दर तिवारी भन्छन्, “हामीले जानकारी मात्र गराइदिएको भए पनि हुन्थ्यो, तर, मुद्दाको प्रकृति हेरेर हामीले उहाँहरुलाई बोलायौँ, अनि पीडित र उनका आमाबुवासँग नै छलफल गर्‍यौँ ।”
तनहुँको दुलेगौँडामा ०७८ वैशाख १४ गते ज’बर्जस्ती कर’णी भएको थियो । सोही वारदातस्थलका आधारमा मुद्दा स्थापित गर्न सहज हुने भनेर तनहुँमा जाहे’री दिने तयारी भयो । अधिवक्ता टंक पौडेलले जाहे’रीको मस्यौदा तयार गरे ।
तर, घरमा नै आउने, उमेर पुगेपछि विवाह गर्छु भनेर भनेका कारण परिवारको मन दोधारमा नै थियो । त्यही दोधारले गर्दा माघ ९ गते तनहुँ प्रहरीमा जा’हेरी दिन पुगेकी पीडितकी आमाले त्यसदिन दर्ता रोकिन् ।
दर्ता गर्ने क्रममा नै उनलाई पलशाह पक्षबाट फोन आयो । फोनमा भनिएको थियो, “जा’हेरी दिए दुवैको करियर सकिन्छ ।”
पी’डितका बुवाले हस्ताक्षर गरेनन् । असइको सुरक्षामा कास्की प्रहरीले पीडितसहित उनका बुवाआमा र अधिवक्तालाई तनहुँ पठाएता पनि जा’हेरी दर्ता भएन ।
उनीहरु फर्के । भोलिपल्टै पल शाह सञ्चारकर्मीसहित पोखरा आए । छलफल गरे । पलले उही पुरानो आश्वासन दिए, “अहिले उमेर पुगेको छैन, उमेर पुगेपछि विवाह गरौँला, मुद्दा मामिलामा नफसौँ ।”
परिवारले सोच्यो होला त नि ! अहिलेलाई रोकौँ । तर, काठमाडौँ फर्केपछि पल शाहले फेरि बेवास्ता गर्न थाले ।
पी’डित बालिकासँग सम्पर्क नभएको त धेरै नै भएको थियो । बालिकाले सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी बेवास्ता गर्थे, अनि बालिकाकी आमालाई फोन गरेर भन्थे, “उनी कता छन्, मेरो फोन नै उठाउँदिनन् ।”
उनको यो दोहोरो चरित्र बुझेपछि बुबा पनि झोँक्किए । “प्रेमको नाटक गरेर मेरी छोरीलाई खेलौना बनाएपछि मलाई रिस उठेको हो,” उनले भने ।
माघ ९ पछि दुईपटक उनीहरुबीच छलफल भयो । तर, उनले एउटै कुरा दोहोर्‍याउँथे, अनि सम्पर्कविहीन हुन्थे ।
“पछिल्लोपटक त लिखित नै गर्ने भन्ने पनि भएको थियो, तर उहाँले ९पल० लिखित गरेपछि माया हुँदैन, मलाई विश्वास गर्नुहोस् भन्नुभयो, हामीले होला त नि भन्यौँ,” बालिकाकी आमाले भनिन् ।
उनको दोहोरो भूमिका खेलेर झुलाउने चाल बुझेपछि दोस्रोपटक फागुन ११ गते परिवार तनहुँ प्रहरीमा पुगे । बालिकाका बुबाले जा’हेरी दिए । उनीहरुलाई आइरहेका लगातार फोनहरु जाहेरी दर्तापछि आउन छाडेका छन् ।
जा’हेरी दर्तापछि उनीहरुले दमौलीमा जे देखे, त्यसलाई पचाइसकेका छन् । भीड आफैँ पछि हटेको छ । चरित्रहत्या गरि राखिएका अनेकौँ दृश्यहरु हटाइएका छन् ।
उनीहरुलाई कास्की प्रहरीले लगातार सम्पर्क गरिरहेको छ, आवश्यक परामर्शदेखि सु’रक्षा दिएको छ ।
“हामीलाई हिम्मत दिएकै कास्की प्रहरीले हो, अब छोरीको न्यायको लागि लड्छौँ, पछाडि हट्दैनौँ,” बालिकाका बुबाले भने ।
समाजको बुझाई पनि फेरिएको छ । का’नूनी प्रक्रियामा गइसकेपछि कानून’कै बर्खि’लापमा पी’डितलाई पीडा थप्नेहरु साम्य भएका छन् ।
युट्युब हेर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकी बालिकाकी आमा छोरीमाथि भएको हिं’साबारे लड्न तयार छन् । उनलाई समाजले के भन्छ भन्ने परवाह अब छैन ।
पीडि’त बालिका झनै निश्चिन्त छन् । आफूमाथि हिं’सा गर्नेले स’जाय पाउनेमा उनी विश्वस्त छन् । आफूमाथि भएको पी’डाबारे बोल्दा करियरलाई केही असर नगर्नेमा उनी ढुक्क छन् ।
“म काठमाडौं फर्किनेछु, र गायनमा नै केन्द्रित हुनेछु, मेरो करियर अगाडि बढ्नेछ, म ढुक्क छु,” उनी भन्छिन् ।
करियर बिग्रन्छ भन्ने धम्की दिएर गरिएका शो’षणका धेरै घटनाहरु अब बाहिर आउने र आफू त्यसको पक्षमा सधैँ लड्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।sorce nagarikpatra
Prevमोरङमा डेढ वर्षको बच्चा ‘चोरेर’ ब’ला’त्का’र’पछि ह’त्या
Nextएकै टोलका ३ जनाको मृ’त्यु, शो’कमा डुब्यो तनहुँको गणेशटोल
आज नेपाल बन्द – अधिकांस शैक्षिक संस्था बन्द, अरु केके बन्द छन् ? हेर्नुहोस् ।
पाथिभरा माताले कल्याण गरुन्, यस्तो छ तपाईको माघ १६ गते आइतवारको राशिफल